dr.fone: Olee nyefee WhatsApp chats n'etiti iOS na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Edere Esteban | | android, software
O kwere omume na n'otu oge ịgbanwee site na otu gam akporo ama ọzọ na iOS ma ọ bụ Anglịkan. Usoro ntinye data anaghị adịkarị mfe. Na mgbakwunye, enwere akụkụ na-echegbu ọtụtụ ndị ọrụ, nke bụ nkata ha na WhatsApp. Ebe ọ bụ na ị pụrụ iji nyefee niile data na ngwa site na otu ekwentị ọzọ. Mana anyị amaghị ntụsara ahụ. Na nke a, dr.fone bụ ezigbo enyemaka.
N'ihi ngwá ọrụ a, anyị ga-enwe ohere nke nyefee WhatsApp si gam akporo ama na iOS otu ma ọ bụ Anglịkan. Ya mere, na anyị nwere niile data na anyị na-eji na-ewu ewu ozi ngwa ngwa niile. Ọ bụ otu n'ime ọtụtụ atụmatụ anyị nwere na dr.fone. Ikekwe ihe kachasị adọrọ mmasị nye ọtụtụ.
1 Gịnị bụ dr.fone?
2 Olee otú nke a mma na-arụ ọrụ na dr.fone
3 Ndabere na weghachite WhatsApp chats
4 Olee otú ibudata dr.fone
Gịnị bụ dr.fone?
Wondershare - dr.fone Ọ bụ ngwá ọrụ nke na-enye anyị usoro ọrụ maka ama anyị, ma iOS ma gam akporo. Ekele ya, anyị nwere ike ịme ụfọdụ omume na ekwentị. Enwere ike idozi nsogbu ekwentị, weghachite data na ha, hichapụ data ngwaọrụ iji kpuchido nzuzo ma ọ bụ data mgbake. Ọ bụ ezie na ọrụ kpakpando na dr.fone bụ iji weghachite ngwa mmekọrịta.
Ọ bụ maka ọrụ a ka anyị na-ekwu maka ya. Ekele anyị nwere ohere mbupụ ma ọ bụ bufee ndị a chats na WhatsApp site na otu smartphone gaa na onye ọzọ n'ụzọ dị mfe maka ndị ọrụ. Yabụ usoro ahụ dị mma, dị mfe ma dịkwa oke ọsọ n'oge niile. O doro anya na, a ngwá ọrụ na ọtụtụ ndị na-eche na ọ ga-ekwe omume na dr.fone.
Olee otú nke a mma na-arụ ọrụ na dr.fone
N'ihi atụmatụ a, ọ ga-ekwe omume ịnyefe nkata ndị a n'etiti ekwentị gam akporo na iOS, na uzo abuo. Usoro ojiji enweghị ọtụtụ nsogbu, ebe ọ bụ na anyị ga-enwe ike ịme ya ozugbo. Anyị dị na ibudata dr.fone na ngwaọrụ, na nke a na kọmputa na-amalite ya. Mgbe anyị mepere ya, anyị nwere ọrụ dịnụ nke weghachite Social Apps.
Ekele maka ọrụ a ọ bụ kwere omume rue WhatsApp n'etiti gam akporo na iPhone ma ọ bụ site na otu ama ọzọ na ụzọ dị mfe. Ya mere, mgbe dr.fone na-agba ọsọ, nke a bụ ọrụ iji họrọ mbụ. Mgbe ahụ, usoro ihe omume ga-ajụ onye ọrụ na-ahọrọ na ngwa nke ha chọrọ nyefee ndị a chats, nke na nke a bụ WhatsApp. Ya mere, ị ga-pịa WhatsApp na nke a kpọmkwem okwu.
Next, pịa Nyefee WhatsApp ozi nhọrọ. Yabụ, Ekwentị abụọ a na-ekwu okwu nwere ike jikọọ na kọmpụta ahụ. Ma ọ bụ gam akporo smartphones abụọ, iPhones abụọ ma ọ bụ otu ụdị nke ọ bụla. Mgbe ha jikọtara kọmputa ahụ, ị ​​ga-akụ bọtịnụ mbufe, ka usoro ahụ wee malite. Ọzọ, dr.fone na-egosiputa a di na nwunye nke ịdọ aka ná ntị ozi, nke anyị ga-anabata na ihe ọ bụla ikpe. Mgbe ahụ, usoro nke na-ebufe ndị a WhatsApp chats ga-amalite site na otu ngwaọrụ ọzọ.
Mgbe emechara ya, ị ga-emeghe WhatsApp na smartphone ọhụrụ, nke e zigara data na ya. Yabụ, n'ime ngwa ahụ naanị ị ga-eweghachite nkata ndị a. Ya mere, anyị ga-enwe mkparịta ụka niile dị na ngwa ahụ dị ọzọ maka dr.fone. Usoro a abụghị ihe mgbagwoju anya ma mechaa ya na nkeji nkeji.
Ndabere na weghachite WhatsApp chats
Ọ bụ ezie na nyefe bụghị naanị ihe na dr.fone-enye gị ohere ime. Ebe ọ bụ na ọ na-enyekwa ndị ọrụ ikike rndabere ma ọ bụ weghachi WhatsApp chats Na ụzọ dị mfe. Nke doro anya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ zuru oke. Ihe a niile nwere ike ime n'otu ọrụ ahụ anyị jiri na ngalaba gara aga.
Ọ na-enye ndị ọrụ ohere ịkwado mkparịta ụka ha nke mere na ọ nweghị data furu efu n'oge ọ bụla. Nke a bụ ihe dị mfe ịme. N'ime nhọrọ a nke Weghachi Social App nke anyị abanyela na mbụ, anyị nwekwara nhọrọ iji kwado ndabere, nke mere na-enye anyị ohere ịme ndabere na ngwa chats. Ọ bụ ihe anyị ga - eme mgbe ekwentị ejikọtara na kọmpụta, iji ya.
N'aka nke ọzọ, anyị nwere ike iji weghachi chats iji dr.fone. Ozugbo emere nkwado ha, mgbe emepere ngwa izipu ekwentị, ịnwee nhọrọ a iji weghachi Ozi WhatsApp na Ngwaọrụ. Mgbe ahụ ị ga - ahọrọ faịlụ ịchọrọ iweghachi, ọ bụrụ na enwere ọtụtụ akwụkwọ ndabere emere. Na mgbakwunye, e nyere ndị ọrụ ohere ịhọrọ nke mkparịta ụka na ngwa ha chọrọ iji weghachi. Yabụ onye ọrụ nwere okwu ikpeazụ n'echiche a n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Olee otú ibudata dr.fone
Dị ka ị pụrụ ịhụ, dr.fone bụ a nnọọ uru ngwá ọrụ maka ọtụtụ nde ndị ọrụ gburugburu ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ ịga site na gam akporo na iOS ma ọ bụ nke ọzọ, ọ bụ ngwa nwere ike ime ka usoro a dị mfe n'oge niile. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ọtụtụ ọrụ, ma e wezụga nke a anyị kpọtụrụ aha. Ọ bụ mmemme anyị ga-ebudata na kọmputa, dakọtara na Windows na Mac.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji dr.fone, anyị nwere ike ibudata na ngwa maka free na kọmputa, site na njikọ a. Ọ bụ ezie na ọrụ a nke iweghachi mmekọrịta anyị na-ekwu maka ya, ọ bụ ngwa akwụ ụgwọ. Anyị nwere usoro ịkwụ ụgwọ atụmatụ dịnụ, ka ị nwee ike ịhọrọ nke kachasị amasị gị, dabere na ojiji ị chọrọ ime. Ga-ahụ na weebụ atụmatụ niile dị.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị mma iburu n'uche ihe eji eme, tupu nbudata a ngwa. Ya mere, na ị pụrụ ịhụ ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie ihe ojiji ka onye ọrụ. Ya mere, ọ ga-adị mfe ịhọrọ atụmatụ nke kachasị mma maka ihe ị na-achọ. Ọ bụ ezie na ị nwere ikike ịme nnwale n'efu, ọ ga-abụ nnukwu enyemaka na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » android » dr.fone: The ngwá ọrụ nyefee na weghachi WhatsApp na iOS na gam akporo
Anyị nwalere Xiaomi Mi LED Smart Bulb, otu n'ime bọlbụ smart dị ọnụ ala na ahịa